အံ့ဩစရာတွေကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြောဆိုနည်း - အပိုင်း (၂) - Myanmar Network
အံ့ဩစရာတွေကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြောဆိုနည်း - အပိုင်း (၂)
Posted by Language Republic on March 29, 2016 at 11:53 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
knock down with feather - (တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုလျှင်) အံ့ဩမင်တက်နေလို့ ငှက်မွှေးလေးနဲ့တို့လိုက်ရင်တောင် လဲကျသွားမယ်။ အလွန်အံ့အားသင့်ကြောင်းပြောဆိုရာတွင်သုံးသည့် ဗြိတိသျှအင်္ဂလိပ် အီဒီယမ်အသုံးအနှုံး။ ပုံမှန်အားဖြင့် 'you could have knocked me down withafeather' (သို့) 'you could have knocked me over withafeather' ဟု ပြောရသည်။
When I heard the name of the winner, you could have knocked me down withafeather! (နိုင်သွားသူ၏အမည်အားကြားလိုက်ရသည့်အခါ ကျွန်မအလွန်အံ့ဩမင်တက်သွားသည်)
When she told me she was going to get married, you could have knocked me over withafeather. (သူမကလက်ထပ်တော့မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော် ကြောင်အန်းအန်းဘာလုပ်ရမှန်းမသိအောင်ကို အံ့အားသင့်သွားတယ်)
lo and behold! - တစ်ခုခုကို ရုတ်တရက် မမျှော်လင့်ပဲ တွေ့လိုက်တဲ့အခါ သုံးတတ်တဲ့ အာမေဋိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
I was watering the flowers when, lo and behold, there was the watch I'd lost! (ပန်းပင်တွေရေလောင်းနေတုံးမှာ မမျှော်လင့်ပဲ ပျောက်သွားတဲ့နာရီကို ပြန်တွေ့လိုက်တယ်)
I went intoabar just next to our hotel and, lo and behold, who should I see sitting there but Jim Gibson. (ဟိုတယ်ရဲ့ဘေးနားက အရက်ဆိုင်ထဲကို ကျွန်မဝင်သွားတော့ - အလိုလေး - မောင်မောင်တစ်ယောက်ထိုင်နေတာတွေ့ပါရော!)
nine-day wonder - ရုတ်တရက်အထူးအဆန်းဖြစ်သွားပေမဲ့ ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာ လူတွေမေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်သွားတဲ့ ထူးမခြားနားကိစ္စတစ်ခု သို့မဟုတ် လူတစ်ဦးကို nine-day wonder လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ nine days' wonder လို့လည်းသုံးတတ်ပါတယ်။
“Last year the art critics praised Jonas as if he wereamaster, but he turned out to beanine days' wonder.” (မနှစ်တုန်းက အနုပညာဝေဖန်ရေးသမားတွေက Jonas ကိုတကယ့်ဆရာသမားကြီးတစ်ယောက်လို ချီးမွမ်းကြပေမဲ့ သူ့ကျော်ကြားမှုက ရေပွက်ပမာပါပဲ။)
raise eyebrows - (တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုလျှင်) တစ်ခုခုကို အံ့အားသင့်ကြောင်း (သို့) မနှစ်မျို့ကြောင်း (သို့) သံသယဖြစ်ကြောင်း ပြတဲ့အနေနဲ့ မျက်ခုံးပင့်ပြီးကြည့်တာပါ။ ဒီအသုံးကို ပိုမိုနားလည်စေဖို့ ဥပမာများကိုလေ့လာကြည့်ပါ။
Jane's miniskirt raisedafew eyebrows at the staff meeting. (Jane ၏ တိုနံ့နံ့စကတ်ကြောင့် ဝန်ထမ်းအစည်းအဝေးတွင်လူအချို့ အံ့ဩသွားကြသည်)
He raised his eyebrows in disbelief. (မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားသောကြောင့် သူကမျက်ခုံးပင့်ပြီးကြည်လိုက်သည်။)
If your doctor prescribes to you unusually high volumes of medication, it will at least raise eyebrows at the pharmacy. (သင့်ဆရာဝန်က သင့်ကို ပုံမှန်ထက်များတဲ့ ဆေးတွေဝယ်ဖို့ ဆေးစာရေးပေးလိုက်ရင် အနည်းဆုံးတော့ (ဆေးသွားဝယ်ရမဲ့) ဆေးဆိုင်က သံသယဖြစ်မှာပဲ။)
rooted to the spot - လန့်သွားလို့၊ အံ့ဩသွားလို့၊ ကြောက်သွားလို့ လှုပ်တောင်မလှုပ်နိုင်ဘူး ဖြစ်သွားရင် ဒီအသုံးကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
Joe stood rooted to the spot as the plane landed on the water. (လေယာဉ်ပျံကြီး ရေထဲမှာဆင်းလာတာတွေ့လိုက်တဲ့ Joe တစ်ယောက် အံ့ဩပြီး မတ်တတ်ရပ်ရက်သား ကြောင်သွားခဲ့တယ်။)
ခုလောက်ဆိုရင် အံ့ဩစရာတွေဖြစ်တဲ့အခါ ဘယ်လိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြောရမလဲဆိုတာကို တော်တော်တီးမိခေါက်မိလောက်ပါပြီ။ အောက်မှာလည်း စကားပြောတဲ့အခါ ချက်ချင်းပြန်သုံးလို့ရမဲ့ ဝါကျတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
I find that very surprising. (အလွန်အံ့အားသင့်စရာပဲ)
I must say it surprises me. (ကျွန်တော်အံ့အားသင့်သွားတယ်လို့ ပြောရမယ်)
I find it extraordinary. (အံ့မခန်းပါပဲ)
How very surprising. (ဪ အလွန်အံ့အားသင့်စရာပဲ)
That’s very surprising. Really? (အံ့ရောဗျာ၊ တကယ်လား?)
That isasurprise. (အံ့ရောဗျာ)
Whatasurprise. (အံ့ရောဗျာ/ မထင်ရဘူးနော်)
Good heavens. (ဘုရားရေ!)
That’s amazing/extraordinary. (ထူးခြားဆန်းကျယ်ပါပဲလား)
My goodness. (ဘုရားရေ!)
What? No! I don’t believe it! (ဘာ! မဖြစ်နိုင်ဘူး! မယုံဘူးကွာ!)
Are you serious? (မင်းအတည်ပြောနေတာလား)
Are you for real? (မင်းအတည်ပြောနေတာလား)
Well, I never! (ဪ - မထင်ခဲ့မိဘူး)
Oh, no! (ဘာ! မဖြစ်နိုင်ဘူး!)
You don’t say. (မင်းဘာပြောလိုက်တယ်)
Who’d have thought it? (ဒါမျိုး ဘယ်သူထင်ထားပါ့မလဲ)
Fancy that. (စဉ်းစားကြည့်ပါအုံး)
You’re kidding. (မင်းနောက်နေတာလား)
No kidding! (နောက်နေတာလား (သို့) အတည်ပြောတာကွ )
Are you pulling my leg? (မင်းနောက်နေတာလား)
You've got to be kidding! (မင်းနောက်နေတာပဲဖြစ်ရမယ်)
You've got to be kidding me! (မင်းနောက်နေတာပဲဖြစ်ရမယ်)
Come on! (သွားစမ်းပါကွာ)
Get out of here! (သွားစမ်းပါကွာ)
That blows my mind. (မယုံနိုင်စရာပဲ)
You're making this up, aren't you? (မင်းရွှီးနေတာမဟုတ်လား)
Permalink Reply by Aung Aung Myint Oo on March 29, 2016 at 14:37